Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jadon Sancho Childhood Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Na Rocket".
Anyị Jadon Sancho Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ịrị elu ya ngwa ngwa na Bundesliga. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Jadon Sancho nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Jadon Sancho nke Childhoodmụaka - Ndụ mbido:
Jadon Malik Sancho mụrụ na 25th nke March 2000 na ndị mụrụ ya Mr na Mrs Sean Sancho na Camberwell, South London United Kingdom. Ikpe ikpe site na ọdịdị ya, ị ga-amara na ọ sitere na agbụrụ dị iche iche.
N'ezie, nne na nna Jadon Sancho si Trinidad na Tobago. Ha abụọ kpebiri ịkwaga England iji mụọ nwa ha nwoke. Eziokwu a bu isi okwu banyere mmalite Jadon Sancho.
Papa ya na mama ya zụlitere ya na mpaghara Kennington dị na South London. Mgbe ya na ụmụnne ya nwanyị tolitere, ọ gara ụlọ akwụkwọ Harefield nke dị na Northwood (ebe obibi nke Crystal Palace Football club) London.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, agụụ Jadon nwere maka bọọlụ hụrụ ya ka ọ debanye aha ya n'akwụkwọ ndekọ aha ndị otu ụlọ akwụkwọ mpaghara ya ebe o nwetara ohere igwu bọọlụ asọmpi n'oge egwuregwu.
Ndụ Street - Mgbe Oge Awa gachara:
Ewezuga ụlọ akwụkwọ, Jadon Sancho bụ otu n'ime ụdị ndị egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ nọ n'ihe egwu, ndị mụtara, zụlite ma kwanye nkà ha igwu bọọlụ n'okporo ámá na n'okporo ụzọ (Bundesliga Report).
Ọ bụ òkè ya na football mere ka ọ ghara ịhọrọ nhọrọ ndị dara ogbenye ọ gaara eme mgbe ọ bụ nwatakịrị. N'ikwu okwu banyere ndị dị otú ahụ, Jadon Sancho kwuru ozugbo…
“Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, achọrọ m ịgba bọl n’okporo ámá. Ndị gbara m gburugburu, e nwere ndị na-eme ihe ọjọọ, mana achọghị m ịme ha, ” kwuru, sị Sancho dị ka ọ kwetara na ọ ga-adịrị ya mfe ịbanye na gburugburu ebe ndị na-adịghị mma.
Jadon Sancho Nwatakiri Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa - Ọrụ Bulọ:
Ụbọchị E Ji Kpebie Ya:
N'ụbọchị a gọziri agọzi, South London nwa nwoke Sancho gara leta ndị enyi ya kachasị mma bụ Reiss Nelson (onye na-egwuri egwu na Arsenal dị ka n'oge ederede) na Ian Carlo Poveda (onye na-egwuri egwu na Man City dika n'oge ederede).
Ndị enyi abụọ ahụ bi n'akụkụ ụlọ ya dị na London, ha niile ga -apụkwa ịgba bọl. Mgbe ha na ndị enyi ndị ọzọ na-egwu bọl dịka ndị mmegide, otu onye nkuzi London aha ya bụ Sayce Holmes-Lewis wakporo mpaghara ahụ.
Ya na mmasị na ụmụaka. N'ikwu maka ihe ọ hụrụ, Holmes-Lewis kwupụtara…
Echere m na ụmụ okoro ndị a na-agba agba. Ha na-eme ka ndị iro ha bụrụ ndị nzuzu na mkparịta ụka ha na njikọ telepathic na nkà ha.
Holmes-Lewis abughi nani umuaka umuaka kama o kpebiri iji njikọ football ya mee ka ha nwee ohere.
Jadon Sancho Biography Eziokwu- Ọrụ Nke Oge:
Jadon Sancho sonyeere Watford mgbe ọ dị afọ asaa ekele maka enyemaka ya na ndị enyi ya nwetara site na Holmes-Lewis.
N'ihi nsogbu ndị dị n'ịga njem kilomita 21.6 site na Kennington ruo ala ọzụzụ Watford Football Club, Sancho ga -achọ ebe obibi nke Watford nyere.
Na ndị ọzọ iji gaa n'ihu agụmakwụkwọ ya, ọ malitere ịga ụlọ akwụkwọ ibe Watford Ụlọ akwụkwọ Harefield dị ka nwa akwụkwọ ịbanye.
Ihe Mmeri Ihe Omume London:
Holmes-Lewis, nwoke nyeere Jadon na ndị enyi ya aka nwere ọkwa dị ka onye nchịkwa obodo maka Southwark Council nke London.
Ọ zụrụ Sancho na ndị enyi ya na ndị otu ụmụaka kacha nwee nka na South London. Ebumnuche Holmes-Lewis bụ ka ha sonye na emume egwuregwu ntorobịa London.
Na ihu ọma, ọ duziri Jadon Sancho na ndị enyi ya ka ha merie asọmpi n'okpuru-11s na mmemme a ma ama.
N'okpuru bụ Sancho ya na ndị enyi ya nwere nrite mmeri ha na -esote. Ọ nọ n'ọnọdụ aka nri yana nso Holmes-Lewis.
Sancho mgbe ọ dị afọ 11 bidoro tụgharịa ohere isonyere Chelsea na Arsenal naanị n'ihi na ọ họọrọ nhazi Watford nke nyere ya ohere ịzụ ọzụzụ oge niile wee gaa ụlọ akwụkwọ.
Nke a bụ oge ọ malitere igosi ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ya na ọ dị mma. Foto Sancho nke dị n'okpuru mere nke ahụ n'ụzọ dị umeala n'obi.
Ka ọ na-eru nso afọ iri na ụma, Sancho malitere omume nke ịfegharị na vidiyo YouTube Ronaldinho na Neymar. Ọ mere nke ahụ karịa ilekwasị anya na ọrụ ụlọ akwụkwọ ya na Watford.
"Oge ọ bụla m gafere ihuenyo ya, ị ga - ahụ peeji nke gosipụtara Ronaldinho ma ọ bụ Neymar na - eme aka," kwuru Louis Lancaster, onye nchịkwa Watford n'okpuru-15s.
Ọbụna ndị maara Sancho n'oge ahụ na-akpọkarị ya “onye na-egwuri egwu”Onye nwere àgwà yiri nke ahụ ndị egwuregwu ahụ ọ kpere.
Ikike ya iji gbanwee bọlbụ dị ka onye anwansi dọtara ndị na-egwu egwuregwu ma dugara ya na klọb egwuregwu mbụ. Na njedebe, Jadon Sancho mgbe ọ kpọtụrụ ezinụlọ ya ka ha kpebie ịdekọ azụmahịa na Man City na 2015.
Jadon Sancho Biography - tozọ a ma ama:
Mgbe ọ dị afọ 14, Jadon Sancho kwagara Manchester City ebe ọ nọgidere na-adọrọ mmasị na ụlọ akwụkwọ mmuta ha na-eto eto ntorobịa na onyinye maka aha ya.
Ọ bụ otu n'ime ole na ole n'ime ndị na-egwu egwuregwu agụmakwụkwọ n'obodo ahụ bụ ndị nwetara mmesi obi ike nke ịbụ ndị a na-enyocha ngwa ngwa n'ime ntọala klọb nke Khaldoon Al Mubarak (onyeisi oche obodo) Emezuru nkwa a.
Mkpebi Ukwu ahụ - Njegharị US:
Ọ bụ naanị awa ole ka City ga -apụ maka njem na USA n'oge ọkọchị nke 2017.
Mgbe onye ọ bụla dị njikere ịbanye n'ụgbọ elu gaa United States, Jadon kpebiri na ya ga -abụ ihe dị iche, yabụ na ọ gaghị eso ndị otu ahụ na njem ahụ.
Sancho siri ọnwụ na ọ chọrọ ihe ịma aka ọhụrụ yana na ike gwụrụ ya na ọ naghị enwe oge igwu egwu.
Nke a hapụrụ Pep Guardiola Idem ama akpa enye nte enye ama ọkọben̄e idem ẹnọ obufa mbufa. Sancho gosipụtara na mkpebi ya dị ka ọ laghachiri iji soro ndị otu na-eto eto na-eto eto ọzụzụ ebe ọ nọbu.
“N'ime izu abụọ ma ọ bụ atọ gara aga, Sancho apụtaghị na ọzụzụ ọzụzụ ahụ. Okwesiri ibia mana o meghi,"Kwuru Guardiola. “Anyị gbalịrị ọtụtụ. Anyị zutere ma rịọ nna ya, nne ya na onye njikwa ya mana ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ asị 'mba, mba, mba, mba, mba', gịnị ka anyị ga-eme? ”
Hapụ nne ya na ụmụnne ya nwanyị nke siri ike maka Sancho bụ onye ya na Sean nna ya na-eme njem iji mezue nkwekọrịta German ya.
“Achọghị m ha ọtụtụ, ma achọrọ m ime ihe ga-akacha baara m uru. Ọ dị m ka ịkwaga Germany bụ ihe kachasị mma maka ọrụ m ” kwuru Jadon Sancho dịka ọ na-akọ akụkọ ya.
Jadon Sancho Bio - Bilie Iji Mara Aha:
Sancho bịanyere aka na klọb Bundesliga Borussia Dortmund na 31 Ọgọst 2017 n'okpuru nkwekọrịta nkwekọrịta na a ga-etinye ya na ndị otu egwuregwu mbụ.
Nkwado nkwekọrịta a kwanyere ùgwù site na klọb German nke hụrụ ya dị ka onye nnọchi Ousmane Dembele.
Ibi na Germany adịghị mfe maka Sancho dịka ọ gbalịsiri ike ịmụ asụsụ German.
Na-anwapụta Ebe Dị Nso Obodo:
N'oge okpomọkụ nke 2018, Sancho mesịrị gosipụta isi ya na ụlọ ịgbaala ya. Oge a, na United States na ndị òtù BVB ya na-akpọ megide obodo ochie ya, Man City.
"Enwere m isi ike igosi na m chere na m mere nke ọma," o kwuru mgbe ndị otu BVB meriri City 1-0 na Chicago.
N'ịga n'ihu na oge 2018/2019, ọ wereghị oge tupu Jadon Sancho bụrụ onye na -eto eto na -eto eto kachasị egwu, onye akpọrọ "onye na-enyere eze aka”Na Bundesliga.
Sancho bụ onye ọkpụkpọ siri ike na nke kwụ ọtọ bụ onye dọwara Bundesliga. Ọ ghọrọ atụmanya kachasị akpali akpali na Europe mgbe usoro ngosipụta dị na vidiyo dị n'okpuru.
N'ebe ndị a, a na-amanye Sancho aha na ndị England Gareth Southgate. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Jadon Sancho Mmekọrịta Ndụ:
Ònye bụ Jadon Sancho mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Mmekọrịta nke Jadon Sancho na-agbanahụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ịhụnanya ịhụnanya ya dị nnọọ iche ma bụrụ nke na-enweghị onwe ya. Sancho dị ka n'oge ederede njirimara dị ala na-adịghị mma.
Jadon Sancho Ndụ Nke Onwe:
Mata ụdị ndụ Jadon Sancho ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Na-amalite, ọ bụ onye nwere mkpebi siri ike, chụpụrụ, ịsọ mpi.
Site na obodo obodo ya, Sancho gosipụtara ụwa na ọ hụrụ nsogbu n'anya n'ezie. Ọnụnọ ya n'etiti ndị ọgbọ ya bụ mmalite nke ihe siri ike na ọgba aghara.
N'ịbụ onye na-agba ọsọ site na football, Sancho na-enwekwa mmasị ịbụ abụ iji gụọ egwu rap. Ebu ụzọ hụ talent a mgbe ya na ya Aubameyang otu oge a gbara egwu ma gbadaa egwu egwu 'Ọ dịghị njọ'n'ime ụgbọ ala. Lelee vidiyo n'okpuru;
Ndụ Jadon Sancho Ezinụlọ:
Inwe nne na nna na -akwado ihe dị mkpa yana nna Sancho onye aha ya bụ Sean bụ onye a kọwara nke ọma dịka ezigbo nna nke merela ike ya niile iji mee ka nwa ya lekwasị anya.
Sean na -arara onwe ya nye mgbe niile maka ihe ịga nke ọma Jadon ọbụlagodi mmebi nke ọrụ ya.
Eziokwu ahụ bụ na Jadon Sancho nọrọ na egwu bụ otuto nye nne na nna ya, ụmụnne ya nwanyị, na ndị ikwu ya ndị guzoro n'akụkụ ya.
Jadon Sancho Eziokwu Eziokwu:
Narị Afọ Iri Afọ ahụ:
Ndị egwu bekee bụrụ abụ otuto nke Jadon Sancho ka ọ meriri ihe ndekọ nke ịbụ onye ọkpụkpọ mbụ amụrụ na narị afọ iri a ga -egwu England.
Nke a mere na mpụta mbụ ya megide Croatia n'ọnwa Ọktoba 2018. N'okpuru ebe a bụ foto nke kpakpando England na mpụta mbụ ya ka ọ na -eti onye na -agbachitere Croatia Josip Pivaraic tupu ịgbanye obe.
Ewere ya dị mkpa maka Dortmund:
Mgbe mkparịta ụka gbatịrị agbatị, Dortmund kwere ka Sancho gwuo egwu na otu otu na India n'oge iko mba ụwa 2017 U17.
Mgbe ahụ, 17 gbara afọ atọ ka akụkụ ya gafere n'ọkwa ịkụ aka nke asọmpi ahụ.
Sancho ahụghị ọkwa ịkụ aka nke asọmpi n'ihi na Dortmund kpọrọ ya bụ onye chọrọ ọrụ nwoke kpakpando ha. Nke a na -egosi etu o si dị mkpa na iguzosi ike n'ihe nye klọb ahụ mere ka ọ bụrụ onye ama ama.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jadon Sancho Childhood Akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.